Soosaarayaasha sagxada sagxada gaarka ah & gudbinta sagxada Jack Iibka | EPONT Jack
Guriga > Alaabta > Dabaqa Jack
U hubso inaad soo qaadato jaakadaha Ranger-ka ee rafaadka ah oo ay ku jiraan iibsashada dameeraha sagxadaada (sida jaakadda gudbinta sagxadda). Waligaa ha ku shaqayn gaadhi kor loo qaaday iyada oo aanu jaakadda ku habooni ku taagnayn meesha.
RFJ-3TQP-ga sida ruug-caddaa ah loo farsameeyay waa-qaade degdeg ah oo badan oo leh 3-tan oo qaadis ah. Dhismaha birta culus iyo biyo-xidheenada ayaa dammaanad qaadaya adkeysiga ugu badan, halka galka badbaadada ee ku dhex jira uu ilaalinayo shaqaalaha iyo qalabka. Haddii aad si lama filaan ah ugu qaaddo baabuur aad ugu culus jaakadda, si lama filaan ah kuugu dumi maayo oo maalintaada ma baabi'in doonto. Haydarooliga ku jira jaakadda sagxadda ayaa si tartiib ah u soo degi doonta. Maadaama aanad waligaa hoos gelin gaadhi aan ku xidhnayn tarabuunka jackka, badbaadadaada shakhsi ahaaneed iyo badqabka hantidaada waa in aan waligeed su'aal la gelin, xataa haddii aad si lama filaan ah u buux dhaafiso jaakadda.
Mashiinka Epont waa ururinta wiishashka kala duwan ee Engine, Dabaqa Jack 3T, Gudbinta Dabaqa Jack kaas oo ah shirkad u gaar ah cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta.1. WAXAAN leennahay shahaadooyinka: Waxaan haynaa shahaado shahaadooyin rasmi ah2. TECHNOLOGY wax-soo-saarka: cilmi-baaris joogto ah iyo hal-abuurnimo3. KU QANACSIINTA MACMIILKA: Bixi badeecad lagu qanco
Epont Tayo Sare leh, "Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd"
3T High Profile hal bamka sagxada sagxadda haydarooligaWaxaan nahay Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. -- EPONT, alaabadayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 wadan sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo iwm. Macaamiishayada waxaa ku jira kuwo badan. Macaamiisha OEM ee ku takhasusay tareennada, baabuurta, fargeeto iyo mishiinnada dhismaha, waxaanu hore ula yeelanay iskaashi in ka badan 10 ka mid ah shirkadaha 500 ee ugu sarreeya adduunka oo ah mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha
Dabaqa Epont-ka ugu Fiican ee leh Qiimaha Warshadda Baadlaha Cagta - EPONT
EPONT Double Ram Hydraulic Jack Bottle Jack ee Isticmaalka BaabuurkaWaxaan nahay Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. -- EPONT, alaabadayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 wadan sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo iwm. Macaamiisha OEM ee ku takhasusay tareennada, baabuurta, fargeeto iyo mishiinnada dhismaha, waxaanu hore ula yeelanay iskaashi in ka badan 10 ka mid ah shirkadaha 500 ee ugu sarreeya adduunka oo ah mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha
EPONT 2T Hydraulic Floor Jack ee Isticmaalka BaabuurkaWaxaan nahay Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. -- EPONT, alaabadayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 wadan sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo iwm. Macaamiishayada waxaa ku jira kuwo badan. Macaamiisha OEM ee ku takhasusay tareennada, baabuurta, fargeeto iyo mishiinnada dhismaha, waxaanu hore ula yeelanay iskaashi in ka badan 10 ka mid ah shirkadaha ugu sarreeya adduunka ee 500 oo ah mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha.
Epont ugu fiican 2.5T Dabaqa Jack Qiimaha Warshada - EPONT
EPONT Double Ram Hydraulic Jack Bottle Jack ee Isticmaalka BaabuurkaWaxaan nahay Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. -- EPONT, alaabadayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 wadan sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo iwm. Macaamiishayada waxaa ku jira kuwo badan. Macaamiisha OEM ee ku takhasusay tareennada, baabuurta, fargeeto iyo mishiinnada dhismaha, waxaanu hore ula yeelanay iskaashi in ka badan 10 ka mid ah shirkadaha 500 ee ugu sarreeya adduunka oo ah mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha
cusub 2.5T sagxadda sagxadda hoose, Alaabadayadu waxay dhaafeen CE, GS& Shahaadada TUV ee Midowga Yurub. Tayada alaabtayadu waa run oo la isku halayn karo. Si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa suuqyada Yurub iyo Ameerika. Dhammaan alaabooyinka waxay qaataan rinjiyeynta ilaalinta deegaanka ee elektrostatic iyo - 45 ° saliid hydraulic, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa meelaha aadka u qabow. Fadlan nagu kalsoonow. Haddii aan doorano epont, waxaan sii wadi doonaa inaan sameyno si ka sii wanaagsan oo ka sii wanaagsan
Alaabtani waxay u adkaysatay tijaabada kooxdayada QC ee xirfada leh iyo dhinacyo saddexaad oo awood leh. waxa uu ku takhasusay wax soo saarka sanado badan. Alaabtu waa hypoallergenic sidaas darteed waxay jilcisaa maqaarka, si weyn u yaraynaysa khatarta falcelinta xun.EPONT Xirfadlayaasha guryaha qaab dhismeedka birta ah, Waxaan leenahay khadadka wax soo saarka 4 iyo 2 khadadka wax soo saarka kulaylka, dhalada dhalada maalin maalmaha ka mid ah waxaan soo saari karnaa qiyaastii 5000pcs, oo ku saabsan jaakadda sagxadda waxaan soo saari karnaa 500pcs.
Qalabkayaga sagxada 3T, waa tayada ugu sareysa, alaabadu waxay dhaafeen CE, GS& Shahaadada TUV ee Midowga Yurub. Tayada alaabtayadu waa run oo la isku halayn karo. Si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa suuqyada Yurub iyo Ameerika. Dhammaan alaabooyinka waxay qaataan rinjiyeynta ilaalinta deegaanka ee elektrostatic iyo - 45 ° saliid biyo nadiif ah, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa meelaha aadka u qabow. Fadlan nagu kalsoonow. Haddii aan doorano epont, waxaan sii wadi doonaa inaan sameyno si ka sii wanaagsan oo ka sii wanaagsan